टन्सिलले सतायो ? आराम पाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय - Sawal Nepal
टन्सिलले सतायो ? आराम पाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७७ कार्तिक २३, १०:४२
टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ ।
टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छौ ।